Manuel Alonso | 08/04/2021 16:00 | dzakawanda
Iyo yekuKorea inogadzira LG inogona kusaziva nzira yekugadzira nharembozha dzakanaka kana hazvo kwete idzo dzinoshandiswa nevashandisi, asi maererano nezwi uye materevhizheni zvinotora keke. Iine iyo zvishandiso zvemidziyo zva2018 inowirirana neAirPlay 2 uye neshanduro nyowani isu tine musika wakafukidzwa kana tichida kunakidzwa neese akanakisa eApple uye nemhando yemhando. Isu takashaya ruzha uye ne mabhaisikopo matsva mukaha wakavharwa.
Korea mutengi wemagetsi anogadzira LG yatanga mutsetse wayo wemabhara e2021 nerutsigiro rwakavakirwa rweAirPlay 2, Apple chishandiso-kune-chishandiso midhiya yekushambadzira tekinoroji. Zvinoenderana nechiziviso mu LG webhusaiti, matsva mabhaisikopo anopa a premium odhiyo ruzivo uye nyore kudzora pamwe neye eco-vanoziva kurongedza uye zvigadzirwa.
Iyo nyowani nyowani inopa yemhando yepamusoro odhiyo, kubatanidza nyore, Smart mashandiro uye akapfava aesthetics ane echimanje kutaridzika yakagadzirirwa kubatsiridza LG's inoshamisa maTV uye inoshanda nemhando chero shongedzo.
Mutsara 2021 ndizvo inoenderana naSiri yekutonga kwezwi uye kutamba-kwemaoko. NeAirPlay 2, Apple vatengi vanogona kuyerera, kudzora uye kugovana mimhanzi yavo yavanofarira uye zvimwe zvirimo zvakananga kubva kune yavo iPhone, iPad kana Mac. Pamusoro pezvo, mabhaisikopo matsva anowiriranawo neiyo AI Sound Pro mashandiro eLG TV. Aya mabara ekurira anosanganisira kutsigira kweDolby Atmos uye DTS: X mafomati ekuteerera, rutsigiro rweDolby Vision kuburikidza ne4K kupfuura-kuburikidza, Meridian Audio tuning, uye yazvino Meridian Horizon tekinoroji.
Nenzira vamwe yemamodeli vari Hi-Res Audio vanopupurirwa yekutadza kurasikirwa ne24-bit / 96 kHz kutamba. Hapana. Zvakanakisa zvinogona kungobatanidzwa nezvakanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » LG inotangisa mabharanzi ne2021 nerutsigiro rwakavakirwa mukati rweAirPlay 2